समर्थन कल 0086-755-83880080
SoonLink ARS प्रयोग को लाभ।
1.Get प्रतिक्रिया र परिणाम सजिलै र तत्काल
आफ्नो दर्शक, विद्यार्थी संग 2.Engage
आफ्नो प्रस्तुति अप 3.Liven
दर्शकहरुको को attentiveness 5.Increase
SoonLink ARS को लाभ के हुन्?
1.2.4GHz आवृत्ति वायरलेस, कुनै वाईफाई आवश्यक;
2.Long दूरी संचार, 100 मिटरसम्मको।
Paring लागि 3.NFC।
, अत्यन्तै सजिलो प्रयोग गर्न 4.Classic परिदृश्य डिजाइन र संक्षिप्त सञ्चालन इन्टरफेस।
5.Instant, सही परिणाम पनि Excel रूपमा पछि प्रयोगको लागि रेकर्ड।
6.No प्रयोगकर्ता क्षमता सीमा।
कुनै पनि समयमा कहीं प्रयोग 7.Wonderful अनुभव।
8.Low मूल्य साँच्चै।
एक वास्तविक समय वायरलेस दर्शक प्रतिक्रिया प्रणाली (ARS) के हो?
एक वास्तविक समय दर्शक प्रतिक्रिया सिस्टम प्रतिक्रिया डाटा प्रविष्ट गर्न प्रेरित गर्न एक केन्द्रीय प्रोसेसर संग एक केन्द्रीय भाग र एक आधार स्टेशन र उत्तरदाताओं लागि वायरलेस प्रतिक्रिया एकाइहरूको एक अधिकता एक रिमोट भाग भइरहेको उत्तरदाताओं एक अधिकता देखि डाटा सङ्कलन लागि एक प्रणाली छ टेलिभिजन मनिटर एक मा, प्रत्यक्ष देखाइएको सक्छ जो वा टेप हुन सक्छ एक नेत्रहीन देख्न सकिने प्रदर्शन गर्न। प्रदर्शन धेरै विकल्प प्रश्न समावेश हुन सक्छ। केन्द्रीय प्रोसेसर प्रत्येक जो एक अद्वितीय ठेगाना छ टाढाको एकाइहरु, संग रेडियो, अप्टिकल वा ध्वनिक संचार लिङ्क मार्फत प्रतिक्रिया डाटा accumulates। केन्द्रीय प्रोसेसर वास्तविक समय मा संचित प्रतिक्रिया डाटा प्रदर्शन र प्रक्रिया प्रतिक्रिया डाटा ओभरले र उत्तरदाताओं देखाइएको प्रदर्शन Originate सक्छ।
को SoonLink ARS लागि के प्रयोग गर्न सकिन्छ?
को SoonLink ARS, अन्तरक्रिया सिकाउने बैठक वोट र सम्मेलन सर्वेक्षण सहित प्रयोगका दायरा लागि सिद्ध छ। तिनीहरूले पनि उपस्थित कर्मचारी प्रशिक्षण, कार्यशालाओं र जोखिम आकलन समयमा प्रतिक्रिया दिने अनुमति प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईं एउटा मुद्दा मा मतदान वा मानिसहरूको ठूलो संख्या जानकारी भेला गर्न आवश्यक कुनै पनि समय, SoonLink ARS यो गर्न सही तरिका हो।
को SoonLink ARS को के समावेश गर्छन्?
को SoonLink ARS हार्डवेयर र सफ्टवेयर समावेश गर्दछ। हार्डवेयर वायरलेस keypads (अप 2000) को एक निश्चित संख्या र वायरलेस रिसीभर र एक USB केबल हुन्छन्। सफ्टवेयर को चलिरहेको सिस्टम माइक्रोसफ्ट विन्डोज वा म्याक ओएस छ कुनै कुरा तपाईंको कम्प्युटर मा स्थापित गर्न सकिन्छ।
को keypads कसरी काम गर्छ?
SoonLink वायरलेस मतदान किप्याड क्रेडिट कार्ड को आकार वरिपरि छ। को keypads एक वर्ग मा प्रत्येक व्यक्ति, एक सम्मेलन वा बैठक दिइएको हो। पैड एक कम्प्युटरको पूर्ण शुद्धता संग कुनै प्रश्न गर्न प्रतिक्रियाहरू कब्जा, एक USB केबल मार्फत जडान जो एक रोटी-आकार वायरलेस रिसीभर संग कुराकानी। यसले भीड नेतृत्व छैन भनेर सम्पूर्ण अज्ञात प्रतिक्रियाहरू लागि अनुमति दिन्छ रूपमा प्रतिक्रिया भेला गर्न अत्यन्तै मूल्यवान तरिका हुन सक्छ। परिणाम पनि collated र लगभग तुरुन्त प्रदर्शित छन्। यो मतदान वा प्रतिक्रिया भेला कुनै पनि मार्गदर्शन विधि भन्दा धेरै छिटो छ।
ठेगाना: कोठा 1407, Kingem खुफिया भवन, Liuxian सडक, Nanshan जिल्ला, शेन्जेन, चीन
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. pcb assembly CNC Rapid Prototyping Products Guide - Featured Products - तातो टैग - Sitemap.xml - AMP Mobile